သာယာဝတီဗျိုင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ဗျိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်သော သာယာဝတီဗျိုင်းသည် ဇီဝဗေဒအလိုအရ အာဒီအိဒီး မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်၍ အီဂရက်တာ အင်တာမီးဒီးယား ဟု ခေါ်သည်။ အလျား ၂၈ လက်မခန့်ရှိ၍ ဗျိုင်းငန်းထက်အတန်ငယ်မျှသေးသော်လည်း ရိုးရိုးဗျိုင်း၊ သို့မဟုတ် ဥဗျိုင်းထက်အတန်ငယ်ပို၍ကြီးကာ ထိုနှစ်မျိုး၏ကြား အရွယ်ဖြစ်သည်။ အခြား ဗျိုင်းများနည်းတူ ရှည်လျားသောခြေတံ၊ ရှည်လျားသော လည်တံနှင့်ချွန်ထက်သော နှုတ်သီးရှိသည်။
ဗျိုင်းငန်းနှင့်သာယာဝတီဗျိုင်းကိုယှဉ်ကြည့်လျှင် ဗျိုင်းငန်း၏ခြေထောက်သည် ပို၍တုတ်ခိုင်ပြီးလျှင် နှုတ်သီး ကလည်းပို၍ကြီးသည်။ အခြားသောခြားနားချက်တစ်ခုမှာ သာယာဝတီဗျိုင်းတွင်ဗျိုင်းငန်းနှင့် အခြားဥဗျိုင်းတို့တွင်မရှိ သော ရင်ပတ်အမွှေးများရှိ၍ ယင်းအမွှေးများသည် အလွန်ဖြူဖွေးနူးညံ့လေသည်။ ထိုရင်ပတ်မွှေးတို့သည် ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့မှစ၍ စက်တင်ဘာလ ရ ရက်နေ့အတွင်း၌သာ ပေါက်ရောက်နေသည်ကိုတွေ့ကြရ၍ ထိုရင်ပတ်မွှေးများ မပေါက်သည့်အချိန်တွင်မူ ဗျိုင်းငန်းနှင့်သာယာဝတီဗျိုင်းကို အရွယ်အစားမှလွဲလျှင် ရုတ်တရက်ခွဲခြား၍မရနိုင်ပေ။ အမွှေး အတောင်ပေါက်စအရွယ်တွင် နှစ်မျိုးစလုံး၌ လှပနူးညံ့သော အမြီး ပိုင်းအမွှေးရှည်များရှိသည်။ ဇူလိုင်လနှင့်ဩဂုတ်လ များမှစ၍ နှစ်မျိုးလုံး၏နှုတ်သီးသည် အရောင်ဝါလာလေသည်။ မိုးတွင်းစပါးစိုက်ပျိုးချိန်တွင် အခြားဗျိုင်းများကဲ့သို့ပင် လယ်ကွက်ထဲ၌လျှောက်၍ ကနန်း၊ လယ်ပုစွန်လုံး၊ ပိုးတုံးလုံး၊ ငမြောင်တောင်ကဲ့သို့သောပေါက်ဖတ်များ၊ ခူများနှင့်အခြားပိုးကောင်မွှားကောင်များကို ရှာဖွေဖမ်းဆီး စားသောက်ကြသည်။ ယင်းသို့ဖြင့် စပါးပင်များကိုဖျက်ဆီးမည့် ရန်သူများကို တစ်နည်းတစ်ဖုံအားဖြင့် သုတ်သင်ရှင်း လင်းပေးသည်။ ထို့အပြင်ကျွဲနွားများ၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် တွယ်ကပ်နှောင့် ယှက်နေသောပိုးမွှားများကိုလည်း ကောက်ယူ စားသောက်ကြသဖြင့် ယင်းတို့နားသည့်အခါ ကျွဲနွားတို့ ကလည်း ငြိမ်သက်စွာခံနေတတ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် သာယာဝတီဗျိုင်း အပါအဝင်ဖြစ်သော ဗျိုင်းမျိုးတို့သည် လူနှင့်ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန် တို့ကို အကျိုးပြုသည့်ငှက်များတွင် တစ်မျိုး ပါဝင်လေသည်။ လူတို့သည် သာယာဝတီဗျိုင်းတို့၏လှပနူးညံ့သော ရင်ပတ်မွှေး၊ အမြီးပိုင်းအမွှေး တို့ကိုအလို ရှိသဖြင့် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ် လေ့ရှိကြရာ ထိုဗျိုင်းတို့သည် စပါးပင်များအား နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီး သောပိုးမွှားများကို သုတ်သင် ရှင်းလင်းပေးသည့်အချက်ကို ထောက်ထား၍ သတ်ဖြတ်ပစ်ခတ် ရန်မပြုသင့်ပေ။ စပါးရိတ်ပြီးချိန်တွင် ထိုဗျိုင်းတို့သည် အခြားဗျိုင်းများ နည်းတူ မြစ်ချောင်းများရှိရာသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားကြပြီးလျှင် ငါး၊ ပုစွန်တို့ကိုဖမ်းယူစားသောက်ကြသည်။ ရေစပ်တွင်ငါးစောင့် ဖမ်းနေသောဗျိုင်းများ တွင်သာယာဝတီဗျိုင်း များလည်းပါဝင် လေသည်။ ယင်းတို့သည်အခြားဗျိုင်းများကဲ့သို့ပင် များစွာအော် မြည်တတ်ခြင်းမရှိချေ။ အိပ်တန်း တက်ချိန်၌သာလျှင် ယင်းတို့၏အသံကိုကြားရ၍ ထိုအော်သံတို့သည်လည်း သာသာ ယာယာမရှိလှပေ။
အခြားဗျိုင်းတို့ကဲ့သို့ပင် သာယာဝတီဗျိုင်းများသည် အအုပ်အသင်းဖွဲ့၍နေတတ်ပြီးလျှင်မန်ကျည်းပင်၊ သရက် ပင်၊ ထနောင်းပင်များ၏ထိပ်ဖျားတွင် အသိုက်ပြုလုပ်နေတတ်ကြ သည်။ အသိုက်များကို တုတ်ချောင်းများ၊ သစ်ခက် ခြောက်များဖြင့် ဖြစ်ကတတ်ဆန်းပြုလုပ်ထားကြ၍ သပ်သပ်ရပ်ရပ်မရှိလှချေ။ မိုးဦးကျအချိန်တွင် သားပေါက်လေ့ရှိ၍ တစ်မြုံလျှင် လေးဥမှခြောက်ဥ အထိရှိတတ်သည်။ သာယာဝတီ ဗျိုင်းတို့သည်အခြားဗျိုင်းများနှင့်လည်း သစ်ပင်တစ်ပင်ထဲတွင် အတူနေထိုင်ကြသည်ကိုတွေ့ရလေသည်။
သာယာဝတီဗျိုင်းတို့ကို အရှေ့နိုင်ငံများ၌ အတွေ့ရများသည်။ သို့သော်မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်း၌ အတွေ့ရ နည်းပြီးလျှင် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသနှင့် မင်းဘူး၊ ရွှေဘိုစသော မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း၌ ပို၍အတွေ့ရများလေ သည်။
↑ BirdLife International (2016). "Ardea intermedia". IUCN Red List of Threatened Species 2016. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22727668A95229595.en.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သာယာဝတီဗျိုင်း&oldid=711455" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။